पर्साको विकासमा स्थानियको साझेदारी हुन सकेन,विश्वप्रकाश अर्याल स्थानीय विकास अधिकारी, पर्सा
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्तापर्साको विकासमा स्थानियको साझेदारी हुन सकेन,विश्वप्रकाश अर्याल स्थानीय विकास अधिकारी, पर्सा
Sunday, 01 May 2016 13:31	Rate this item
पर्सा आर्थिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले चर्चामा रहेर पनि समग्र विकासमा पछि परेको जिल्ला हो । औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र मानिएको वीरगञ्ज यसै जिल्लामा पर्दछ । यही आर्थिक केन्द्र पछिल्लोपटक तराई मधेश आन्दोलनका लागि पनि बढी प्रभावित भयो । जिल्लामा विकास निर्माणका योजनाहरूको समन्वयकारी निकाय जिल्ला विकास समितिले हालैमात्र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यो अवस्थामा पर्सामा विकास निर्माणको अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालस“ग पत्रकार ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी पर्सामा समग्र विकासको अवस्था कस्तो छ ? भौतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासलाई सँगसँगै लैजाने उद्देश्य हो । पर्सा सूचकाङ्कमा पछि परेको जिल्ला मानिन्छ । स्वाभाविक रूपमा विकास निर्माणका योजनादेखि तिनको कार्यान्वयनको तहसम्म समस्या छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक चेतनाजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । पर्सामा हामीले धेरै काम गर्‍यौं, तर जनताको चेतनाको स्तर माथि उठाउन सकिएन । यो समग्र तराईकै समस्या हो । स्थानीय समुदायले विकासलाई आत्मसात् गर्ने वातावरण नै बन्न सकेन । योजना तर्जुमादेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्ममा समुदायको सक्रियता, योगदान, लागत साझेदारीका कुरामा जागरुकता आउन सकेको छैन ।
विकासमा स्थानीयको सहभागिता अभिवृद्धिका कार्यक्रम चाहिँं कस्ता छन् ?
विकासमा सरोकारवालाको साझेदारीका लागि सामाजिक परिचालनलाई सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । आगामी वर्षका लागि विकासलाई आत्मसात् गर्ने र स्वलगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याइएका छन् । विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रम नआएका भने होइनन् । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी थिएन । सबै निकायले आआफ्ना कार्यक्रम लिएर जाँदा एकले अर्कोलाई सहयोग र समन्वयको वातावरण बनेन । ग्रामीणस्तरमा प्रभाव पुग्न सकेन । आगामी वर्ष यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी छ । यसका निम्ति अहिलेदेखि नै गृहकार्य भइरहेको छ ।
पर्सामा विकासका प्राथमिकता के–के हुन् ?
आगामी वर्ष २०७३/७४ को बजेट भौतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरेका छौं । भौतिक पूर्वाधारमा सडक निर्माणको माग अत्यधिक पाइयो । सीमित स्रोत समस्याका रूपमा देखिएको छ । जिल्लाका यातायातको योजनामा परेका सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौं । सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ नै मुख्य हुन् । सरकारले २०१७ भित्र राष्ट्रलाई नै खुला दिशामुक्त बनाउने लक्ष्यअनुसार पर्सामा पनि काम अघि बढाइएको छ । पूर्ण खोप सुनिश्चित गराउने, वातावरणमैत्री, पूर्ण साक्षरताजस्ता अभियान पनि छन् । यसमा समुदायको उच्चतम परिचालन जुटाउने गरी नीति तय भएको छ । आर्थिक विकासमा सम्भावनाहरूको अधिक उपयोगमा ध्यान दिइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको सम्भावना बढी छ । पशुपालन र धान उत्पादनमा उत्पादकत्व वृद्धिलाई जोड दिएका छौं । पशुपालनको पकेट क्षेत्र पहिचान र सहयोगको वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस्ता लक्ष्यलाई समेट्ने योजनाहरू के–कस्ता छन् ?
जिविस र सरोकारका अन्य कार्यालयको सहकार्यमा योजना बनाइएका छन् । कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय, शिक्षा कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यसमा काम गरिरहेका छन् । जिल्लाको विकासमा काम गर्ने निकाय र सङ्घसंस्थाहरू एकबद्ध भएर जानुपर्छ । ‘डिष्ट्रिक्ट रोड कोर नेटवर्क’अन्तर्गत गाउँदेखि सदरमुकामसम्म बाह्रै महीना यातायात सुचारु गर्न सकिने गरी सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । यस्ता सडक २३ ओटा छन् । ती सडकमा लगानी गर्न सकियो भने ५ वर्षमा सबैलाई पक्की बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट केही ठूला सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । पर्साका जनता सडक, आत्मरामपथ पोखरिया–लङगडी–भिस्वा सडक, रामगढवा–जगरनाथपुर–मिलनचोक सडक, धोरे–सोनवर्षा सडक, पदम रोड, जानकीटोला–भिस्वा सडकलगायत १० सडकमा काम भइरहेको छ । यी सडकमा ग्राभेल भइसकेकाले तत्कालै पक्की गर्न सकिन्छ ।
गाविसहरूको अधिकांश बजेट शौचालय निर्माणमा सकिएको छ । तर, पर्सामा खुला दिशामुक्त अभियान सन्तोषजक छैन नि, किन ?
अहिलेसम्म पर्साका १० ओटा गाविस खुला दिशामुक्त भइसकेका छन् । हामीले २०७३ चैतभित्र जिल्लालाई खुला दिशामुक्त बनाउने लक्ष्य राखेका छौं । यो सामाजिक अभियान हो । तर, शौचालय पनि सरकारले बनाइदिनुपर्छ भन्ने स्थानीयको अपेक्षाले समस्या भएको छ । गाविसमा जाने सबैजसो रकम शौचालय निर्माणमा प्रयोग भएको पाइयो । अति विपन्नलाई मात्र केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, सक्षमले पनि दुरुपयोग गरेको पाइयो । यसरी गाविसको स्रोतले धान्दैन । कतिपय ठाउँमा अनुदान लिएर दुरुपयोग गरेको पनि देखियो । शौचालय बनाए पनि अपनत्व नलिएको अवस्था छ । अपनत्व जगाउन पनि अनुदान रोक्नुपर्दछ । शौचालय बासिन्दा आफैले निर्माण गर्नुपर्दछ । यो निर्देशन गाविसमा गइसकेको छ । अब शौचालयमा बजेट छुट्याए निकासा रोकिन्छ । अति विपन्नहरूको लगत सङ्कलन गर्ने र आफै गर्न सक्नेलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको कार्यक्रमका लागि सरसफाइमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरूसित समन्वय भइरहेको छ । अनुदानलाई निरुत्साहित गर्ने नीति परिषद्ले पास गरिसकेको छ । त्यो नभए २०१७ सम्ममा खुला दिशामुक्तको लक्ष्य पूरा हुँदैन । पर्सामा ४६ हजार घरधुरीमा अझै शौचालय निर्माण भएको छैन । अहिलेको लगानीको अवस्थालाई हेर्दा १५ करोड अझै चाहिन्छ । यो पर्साका गाविसको २ वर्षको बजेट हो ।
पर्सा तराई–मधेश आन्दोलनको पनि केन्द्र बन्यो । यसबाट विकास निर्माण कत्तिको प्रभावित भएको छ ?
मधेश आन्दोलनका कारण विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकिएन । पूँजीगत खर्च त भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । चालू वर्षमा १५÷२० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छैन । अहिलेसम्म विकास निर्माणका कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेनन् । करीब ४ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । पुसमा हुनुपर्ने जिल्ला परिषद् फागुनको अन्तिममा भयो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको भर्खरै योजना छनोट भएको छ । विकासका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन् ।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदाका समस्या कस्ता छन् ?
पक्कै पनि समस्या छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा योजना छनोटमै समस्या देखियो । माग सृजना गर्न र आवश्यकता पहिचानमै कठिनाइ भयो । योजना नै राम्रो नबनेपछि त्यहाँबाट समस्या शुरू भयो । यसैमा कार्यान्वयन र सफलताका कुरा जोडिएका हुन्छन् । जनताका प्रतिनिधि भइदिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन ।	Read 311 times	Last modified on Sunday, 01 May 2016 13:48	Tweet
« कांग्रेस छोडेका सुरेन्द्र चौधरी भन्छन् : घर छोडेपनि डेरा खोज्दै हिँडेको छैन	स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी कर र राजस्वका प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्छ,रवीन्द्रकुमार बरनवाल »